isakhiwo iinkuni zemveli ukususela 1874 Joint House - I-Airbnb
isakhiwo iinkuni zemveli ukususela 1874 Joint House
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJointPlus
Amaxesha aseJapan amandulo, “Meiji”, “Taisho”,　”Showa” kunye ne“Heisei”.Ngalo lonke eli xesha lide le-4, le ndlu ibizinzisile ubomi bomniniyo. Ngaloo ndlela indlu enamasimi erayisi kunye namanye amasimi akufuphi ihambelana nenkangeleko yendawo. isikhumbuza ngembali yayo, Thina, "iNPO Joint Plus" siyilungisile le ndlu njenge "Joint House" kwaye siqalise iBed & Breakfast ukusukela kolu kwindla lwexesha elitsha laseJapan, "Reiwa".
Into esingathanda ukuyidlulisela kubakhenkethi ngale Ndlu iDityanisiweyo kukukhawulwa kweJapan "Wa".Kuthiwa kususela kudala abantu baseJapan bafumana ixabiso elitsha kunye nobuhle ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo.Injongo yethu yale "Wa" isuka kwi intabalala kunye nendalo eyahlukeneyo eJapan.
Umzekelo kwilizwe le-Occidental, kubonakala ngathi bafumana ubuhle kulungiselelo oluqhelekileyo lwemithi ebonwa kwindawo ebizwa ngokuba yigadi yejometri. Kwelinye icala eJapan, sisenokuba sifumene ubuhle kulungiselelo olungaqhelekanga, olungeyo-geometric yemithi. Singatsho ngokukhuselekileyo ukuba isizathu sale ngqiqo yaseJapan savela ekufumaneni kwethu ubuhle kulungiselelo lwemithi njengoko lwalusehlathini, olugcina imithi yendalo engeyiyo yejiyometri. , nemithi esehlathini igqabhukile okanye ixinene. Le meko ibonakala ibonakaliswe ekwenzeni izitiya zemveli zaseJapan.
Ngolu hlobo, ukulandelelana kwemithi enqabileyo okanye exineneyo kunye nokulandelelana kwemithi kudityaniswe neentlobo ezahlukeneyo zenze amahlathi kunye nobuhle bawo bendalo kweli lizwe. Indlela eqhelekileyo yokwakhiwa kwendlu eJapan nayo yamkele ukukhulelwa "Wa".Indlela isebenzisa "isakhelo somthi" apho sidibanisa amaplanga. Kwaye inokubonelela ngendlu ubungqina obuphezulu benyikima, ukumelana nomlilo okuphezulu, kunye nokusebenza okuphezulu kokusingqongileyo. Nangona kunjalo, kuthiwa isitayile saseJapan sokwakha indlu　ukusebenzisa isakhelo sobuchule somthi sitshintshe kakhulu ukusukela kwixesha le-“Meiji”. "INdlu eDityanisiweyo" yakhiwa ngobuchule bemveli baseJapan bokwakha indlu. Ke imbali yale ndlu ye-145 yeminyaka inokusikhuthaza "Wa", ngelishwa malunga nokuphela naseJapan ngoku. Ngaloo ndlela "Wa" uthetha iJapan ngokwayo, kwaye ikwathetha "imvumelwano", "uxolo", "intsebenziswano ngokudibanisa izinto". Singathanda ukuyixabisa le “Wa” ngengqiqo ebanzi apha ngasentla. Emva koko sinethemba lokuba "iNdlu eDityanisiweyo" iya kuba ziindwendwe ""Ikhaya", ukonwabela ukudibana nabantu abohlukeneyo kunye neengcinga zabo apho. Kwaye sinethemba lokuba la mava asenza ukuba sifumane enye ingcamango exabisekileyo ethi "Wa", enokuthi kwabelwane ngayo nabantu behlabathi.
Indlu edibeneyo ibekwe e-Odai-cho, kwaye yonke i-Odai-cho iqinisekisiwe njenge-UNESCO Eco Park,
Lo mmandla utyebile yaye unezinto ezahlukeneyo zendalo, njengeMiyagawa, eyakhethwa njengomnye weyona milambo icacileyo eJapan, neNtlambo yaseOsugi ekwiiNtlambo Ezithathu Ezinkulu zaseJapan.
Unokunxibelelana nabantu basekhaya abaziingcali ezifana nenkcubeko yaseYamamura kunye nobomi,
Amava unique Odai-cho kunokwenzeka.
Umbuki zindwendwe ngu- JointPlus
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 三重県 | 三重県指令　松　保第　56-1900-0004　号